डच जानुहोस्! डचटाउन घर कसरी बनाउने • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
डच जानुहोस्! डचटाउन घर कसरी बनाउने
सामेल डचटाउन मुख्य सडकहरू र डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन तपाइँ कसरी डचटाउन घर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि जानकारीमूलक भेलाको लागि! हामीसँग पहिलो पटक घर खरीद गर्नेहरू, कम र मध्यम आय भएका खरिदकर्ताहरू, भाडामा लिनेहरू, र डचटाउन छिमेकमा जराहरू राख्न खोजिरहेका अरू कोहीका लागि धेरै स्रोतहरू हुनेछन्।
यो घटना बुधबार, मार्च 16, 5:30 बजे साँझमा हुनेछ मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास, Chippewa स्ट्रीट मा 3830 दक्षिण ग्रैंड बुलेभार्ड मा स्थित छ। हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं आउँदै हुनुहुन्छ र आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुहोस् फेसबुक घटना पृष्ठ.
जानकारीको डुङ्गा लोडको अतिरिक्त, हामीसँग डचटाउन रेस्टुरेन्टहरू, पेय पदार्थहरू, र सहभागीहरूका लागि उपहारहरू पनि हुनेछन्। साथै, तपाईंसँग डचटाउनलाई घर कल गर्नको लागि उत्कृष्ट स्थान बनाउने केही मानिसहरूलाई भेट्ने, हाम्रो छिमेकको बारेमा हामीलाई मनपर्ने कुराहरू पत्ता लगाउने, र तपाईं हाम्रो समुदायमा किन राम्रो फिट हुनुहुनेछ भनी जान्ने अवसर पाउनुहुनेछ।
हाम्रो प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद!
हाम्रो गो डचलाई विशेष धन्यवाद! प्रायोजकहरू ब्रायन एलेन - थप रियाल्टर्स टोली रोजेलर, वाणिज्य बैंक, मिडवेस्ट BankCentre, समृद्धि कनेक्शन, क्षेत्र बैंक, आरई स्रोत, स्टेफनी नेल्सन पोन्ड्रोम - कोल्डवेल बैंकर गुंडाकर, सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल, टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम, र यूएस बैंक। यदि तपाइँ यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस् info@dutchtownstl.org.
डच जानुहोस्! २०१९
हामी केही वर्ष पहिले डचटाउनमा घर खरिद गर्ने बारे कुरा गर्न पनि जम्मा भएका थियौं, विशेष गरी घर जग्गा व्यवसायीहरूसँग जो हाम्रो छिमेकले प्रस्ताव गर्ने सबै कुरासँग परिचित नहुन सक्छन्। यो एक सफल र राम्रोसँग उपस्थित भएको कार्यक्रम थियो जसले एजेन्टहरू, ऋणदाताहरू, र वर्तमान र भविष्यका छिमेकीहरूलाई डचटाउन घर बनाउने बारे जान्नको लागि अवसरहरू प्रदान गर्‍यो।
हाम्रो 2019 गो डच बारे थप जान्नुहोस्! घटना र हाम्रा अघिल्ला कार्यक्रमहरूबाट सामग्रीहरू फेला पार्नुहोस्।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो मार्च 14th, 2022 .
डचटाउन STL.org डच जानुहोस्! डचटाउन घर कसरी बनाउने